Inkqubo YaseArmenia Engenakuthanani Nomkhosi
FUNDA NGOLUNYE ULWIMI ISepedi ISpanish Isi-Indonesia Isi-Itali IsiAlbania IsiArmenia IsiBhulu IsiChichewa IsiCibemba IsiCroatia IsiCzech IsiDanish IsiDatshi IsiEstonia IsiEwe IsiFinnish IsiFrentshi IsiGeorgia IsiGrike IsiHungary IsiJamani IsiKikaonde IsiKorea IsiLithuania IsiMalagasy IsiNgesi IsiNorway IsiPhuthukezi IsiPolish IsiRashiya IsiRomania IsiSerbia IsiSerbian (saseRoman) IsiSlovak IsiSlovenia IsiSwahili IsiSwedish IsiTagalog IsiTshayina SaseMandarin (Esenziwe Lula) IsiTshayina SaseMandarin (Esiqhelekileyo) IsiTurkish IsiUkrainian IsiXhosa IsiZulu
Sele ingunyaka kusenziwa iinkonzo ezingenakuthanani nomkhosi eArmenia, ibe le nkqubo iqhuba kakuhle. Abafana bamaNgqina kaYehova baba ngabokuqala ukuba nenxaxheba kule nkqubo kunokuba bavalelwe kuba bengayi emkhosini ngenxa yezazela zabo.
Ukususela ngo-1985, abafana abangamaNgqina eArmenia bebevalelwa entolongweni kuba bengayi emkhosini ngenxa yezazela zabo. Ngenxa yokuba bekungekho lungiselelo lokuba kwenziwe eminye imisebenzi kunokuya emkhosini, kangangeminyaka eyi-20, amaNgqina angaphezu kwe-450 ebevalelwa phantsi kweemeko ezinzima. Izinto ziye zatshintsha ngoJuni 2013 xa iArmenia ibitshintsha uMthetho Wokwenziwa Kwezinye Iinkonzo.
Bekungo-Oktobha 23, 2013 xa iKomiti YeRiphabliki YaseArmenia yamkela izicelo zokuqala eziyi-57 zokwenza ezinye iinkonzo, ibe zonke ezo zicelo yayizezamaNgqina kaYehova angayiyo emkhosini ngenxa yezazela zawo *. Kamva, iKomiti YeRiphabliki yafaka namanye amaNgqina kule nkqubo. Abafana abangamaNgqina abayi-71 baqalisa ukusebenza ebudeni beveki kaJanuwari 13, 2014. Uthe ephela u-2014, abe engaphezu kwayi-126 amaNgqina ebesenza ezinye iinkonzo ezingenakuthanani nomkhosi.
Yintoni Inkonzo Engenakuthanani Nomkhosi?
Ngumsebenzi oluncedo ekuhlaleni—othathel’ indawo ukuya emkhosini—ongangqubaniyo nezazela zabo bawenzayo. Awukho phantsi komkhosi ibe kwenziwa umsebenzi oluncedo ekuhlaleni. Iimeko owenziwa phantsi kwazo lo msebenzi azikho nzima kangako ibe awenziwa ixesha elide kakhulu. Imizekelo yemisebenzi engenakuthanani nomkhosi iquka unontlalo-ntle, umntu osebenza phandle, umntu ococa izitrato, umntu olungisa izinto ezonakeleyo, umntu oqokelela inkunkuma, umntu oncedisa umongikazi, unoposi, umabhalana, umntu ococayo, umntu oqhuba inqwelo yezigulana nomntu osebenza eofisini.
Ukuphumelela Kwale Nkqubo
Le nkqubo iye yaphumelela, oko sikuva koko kuthethwa ngabaphathi nangabanye abasebenzi. Baye bayiphawula indlela abasebenza kakuhle ngayo, indlela abanceda ngayo nendlela abanesimilo ngayo abafana bamaNgqina. Amalungu aliqela eKomiti YeRiphabliki aye aqaphela ukuba amaNgqina amenzela umsebenzi omhle urhulumente waseArmenia ibe akhuthele.
“Nilenzela umsebenzi omhle ilizwe lethu nakuba nifumana umvuzo omncinane. Kucacile ukuba nisebenza nzima.”—Umphathi WeeNkonzo Zasekuhlaleni ZaseYerevan/Shengavit.
“Sininqwenelela okuhle! Nizama ukuphila ngemithetho yamaKristu ibe kwangaxeshanye nizama nokuba lulutho ekuhlaleni.”—Umongikazi okwikhaya leenkedama elisebenza amaNgqina.
“Aninakundibizela amanye amaNgqina, aze kundisebenzela?”—Umphathi Omkhulu WeeNkonzo Zasekuhlaleni ZaseYerevan/Arabkir.
AmaNgqina akwinkqubo engenakuthanani nomkhosi ayicoca aza ayenza ntle ipaki ekumbindi weYerevan.
NamaNgqina akule nkqubo aye athetha kakuhle ngayo.
“Ndiyayithanda indlela abandihlonela nabandithanda ngayo abantu endisebenza nabo. Ngeny’ imini ndandigula ndisendlini. Abantu endisebenza nabo bandifowunela bandibuza ukuba ndinjani. Lo msebenzi ndiwugqala njengentsikelelo kuba uyalivula ithuba lokuba ndikhonze uThixo ndingaxhalabanga.”—UGevorg Taziyan, osebenza kwiinkonzo zohlangulo.
“Sisebenzisana kakuhle nabaphathi nabasebenzi. Ngenxa yokuba besinyamekela, nathi siye sizame ukubaphatha kakuhle. Maxa wambi besinikwa umsebenzi ongengowethu, kodwa besiwenza.”—USamvel Abrahamyan, osebenza phandle kwiSibhedlele Sengqondo ESevan.
“NgoJanuwari 14, 2014, sibayi-13 abaqale ukusebenza kwindawo yeenkonzo zohlangulo. Ukususela ngoko ukuza kuthi ga ngoku, siyavana sonke. Asinyusani sihlisana nabaphathi. Bayayithanda indlela esiwenza ngayo umsebenzi.”—UArtsrun Khachatryan, osebenza ngaphandle kwindawo yeenkonzo zohlangulo.
Eyona nto yenze yaphumelela le nkqubo yaseArmenia yeenkonzo ezingenakuthanani nomkhosi, yintsebenziswano yabaphathi, isimilo nokusebenza kakuhle kwamaNgqina. AmaNgqina KaYehova aseArmenia ayalivuyela eli thuba lokusebenzela ilizwe lawo engakhange alalanise kwiinkolelo zawo okanye avalelwe ngenxa yokuba engayi emkhosini ngenxa yezazela zawo.
^ isiqe. 4 Ukuze ufumane inkcazelo engakumbi, funda inqaku elithi “IArmenia Ivula Ithuba Lomsebenzi Wabantu Abangafuniyo Ukuya Emkhosini”
Omnye umntu ohlala kwikhaya lokunyamekela abantu abalupheleyo eYerevan wayekuxabisa ukunyanyekelwa ngomnye umfana kangangokuba wade wabhalela usihlalo weKomiti YeRiphabliki ovelela le nkqubo yeenkonzo ezingenakuthanani nomkhosi. Wabhala wathi: “Ndimbulela ngokukhethekileyo uGnel Sargsyan, oliNgqina likaYehova. . . . UGnel unesazela, ukrelekrele, uthozamile, unengqiqo ibe unomonde. . . . Ingxaki zabanye abantu ziba zezakhe yaye usoloko ekulungele ukunceda.” Waphendula wathini uGnel? “Ileta yakhe yokubulela iyandivuyisa kakhulu ngokukodwa kuba endincoma kuba ndiliNgqina likaYehova. Andizimiselanga ukungenzakalisi abanye ngezixhobo zokulwa nje kuphela, kodwa ndizimisele nokunceda abanye. Le nkqubo ingenakuthanani nomkhosi indenza ndizive ndanelisekile ngenxa yokuba ndenzela abanye izinto ezintle.”